.NET Blogging Blogging | Martech Zone
.NET Blogging Blogging
Alatsinainy, May 28, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tsy afaka ny tsy hihomehy aho rehefa nanandrana nanara-maso ny .NET Blogging Engine izay vao navoaka:
I work in a .NET shop, so I'm sure the developers will give me a hard time about this tomorrow. I think I'll be sticking to WordPress ary PHP / MySQL mandritra ny fotoana maharitra!
Valisoa ve ny varotra tompon'andraikitra?
May 29, 2007 amin'ny 8: 12 AM
Mbola midina fikojakojana.
Tsy tena fandefasana tena tsara!
May 29, 2007 amin'ny 10: 40 AM
Tena mahatsikaiky ity. Misaotra ny fizarana.
May 30, 2007 amin'ny 10: 00 AM
Mampihomehy be izany, fantatro. Tsy nahy aho fa namafa ireo rakitra sasany avy amin'ny mpizara tranonkala - fisie izay tsy nanana ny tenako. Tena embarrasing ilay izy ary mendrika ny hilomano kely, indrindra satria vao avy namoaka lahatsoratra momba azy io ny gazety danoà iray tamin'io andro io ihany. Doh!